Data Recovery Maka Mavericks: Naghachi Lost Data na Mac OS X Mavericks
> Resource> Naghachi> Data Recovery maka Mavericks: Naghachi Lost Data na Mac OS X 10.9 (Mavericks)
The Kacha ọhụrụ Mac OS X Mavericks n'ezie ka anyị a mma ahụmahụ na-arụ ọrụ ma ọ bụ ẹnyene na gị Mac. Otú ọ dị, nke bụ eziokwu bụ na i nwere ike ka na-enwe ize ndụ nke ịdapụ data na kọmputa gị, n'agbanyeghị na ị na-agba ọsọ ma ọ bụ Mavericks Mountain odum. Ugbu a na ị na kwalite gị Mac a Kacha ọhụrụ Mac OS X 10,9, ihe i nwere ike ime mgbe ị na mberede ehichapụ mkpa data na bupụrụ ahịhịa na gị Mac?
Echegbula. Wondershare Data Recovery for Mac E emelitere maka Mavericks n'oge mbụ, ka ndị nile Mavericks ọrụ nwere ike ịnọgide na-eji ya na-agbake furu efu data ha na kọmputa. Gịnị nwere ike a data mgbake maka Mavericks-eme? Ọ na-ekwe ka ị na-naghachi furu efu photos, videos, ọdịyo, akwụkwọ, Archives, ozi ịntanetị, na kwa iPhone data dị ka ozi kọntaktsị, ndetu, kalenda, oku na ndekọ na igwefoto mpịakọta. Ihe bụ ihe ọzọ, ị nwere ike iji ya ike iṅomi na-agbake furu efu data si kasị nchekwa ngwaọrụ, ọ bụghị nanị na Mac ike mbanye. Ugbu a, download ikpe version n'okpuru maka free inwe a na-agbalị site onwe gị.
Cheta na: N'agbanyeghị ebe i furu efu gị data, biko na-disk ma ọ bụ ngwaọrụ mbụ ruo mgbe ị na-ahụ data. Ọ bụla ọrụ na isi iyi disk ma ọ bụ ngwaọrụ nwere ike ime ka ahụ furu efu data overwritten na unrecoverable.
Igosi data mgbake on Mavericks na ole na ole nzọụkwụ
Nzọụkwụ 1. Gbaa ndị data mgbake maka Mavericks
Mgbe ị na-agba ọsọ a Mavericks data mgbake software, ị ga-ahụ isi window dị ka ndị a. E nwere ise nhọrọ maka gị ịhọrọ site na. Dị nnọọ ka nkọwa maka onye ọ bụla mgbake mode, ị nwere ike họrọ nri onye dị ka gị onwe gị na ọnọdụ. Ebe a, ka na-onye mbụ dị ka a na-agbalị: Lost Njikwa Iweghachite.
Nzọụkwụ 2. iṅomi ike mbanye ebe ị-efu ndị data na Mavericks
Mgbe na ịnweta Lost File Iweghachite nhọrọ, ị ga-ahụ ndepụta nke ike draịva na kọmputa gị. Mpụga ike draịva na ngwaọrụ ga-ghọtara na egosipụta n'ebe ahụ. Họrọ onye na site na nke ị furu efu ndị dị mkpa data na pịa iṅomi n'elu menu.
Cheta na: Ọ bụrụ na ndị data ị chọrọ iji naghachi bụ otu ụdị faịlụ, ị nwere ike nụchaa Doppler N'ihi site n'isetịpụ faịlụ ụdị n'okpuru ike mbanye ndepụta, dị ka foto, video, audio, akwụkwọ na ndị ọzọ.
Nzọụkwụ 3. Preview na-agbake data gị Mavericks kọmputa
Doppler ga-ewe gị a obere mgbe. Mgbe ya, ị ga-enweta a Doppler N'ihi ebe niile recoverable data na kọmputa gị na-achọta na-egosipụta. Ego ha otu otu. Mgbe ahụ nne Mmetụta ihe ị chọrọ na-azọpụta ha ka gị na kọmputa site na ịpị Naghachi bọtịnụ na n'elu nke window.
Rịba ama: Ọ bụrụ na e nwere ọtụtụ faịlụ na Doppler N'ihi ya, i nwere ike iji inyeaka ngwaọrụ-ebelata atule oge, dị ka ụdị nke faịlụ iyo, search ọrụ, wdg Ọzọkwa, ọ bụrụ na ị chọrọ iji naghachi data mgbe e mesịrị, ọ ga-abụ mma ịzọpụta Doppler N'ihi na kọmputa gị mbụ. Mgbe ahụ, ị ​​na mkpa iji mbubata ya ka software ịrụ a data mgbake on Mavericks, n'ihi gị data si nchekwa.